कति पर्यो मध्य भोटेकोशीको आइपीओमा आवेदन ? - Aarthik Sanjal
कति पर्यो मध्य भोटेकोशीको आइपीओमा आवेदन ?
काठमाडौं ।मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनीको आइपीओमा २ करोड ३५ लाख ९२ हजार २९० कित्ताको लागि आवेदन परेको छ । बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटलका अनुसार शुक्रबार दिउँसो ३.३० बजे सम्ममा १५ लाख ६२ हजार १८० जना आवेदकबाट २ अर्ब ३५ करोड ९२ लाख २९ हजार रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको हो । यो आवेदन सर्वसाधारणबाट माग गरिएको भन्दा २.८८ गुणा बढी हो ।
कम्पनीले असोज २० गतेबाट कुल ९० करोड रुपैयाँ बराबरको ९० लाख कित्ता साधारण सेयर बिक्रीमा ल्याएको हो । जसमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात् ४ लाख ५० हजार कित्ता सामूहिक लगानी कोष र ४ प्रतिशत अथवा ३ लाख ६० हजार कित्ता सेयर कर्मचारीहरुका लागि छुट्याइएको छ । बाँकी ८१ लाख ९० हजार कित्ताका लागि सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्नेछन् । असोज २५ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ ।
लगानीकर्ताले यसमा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १० हजार कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । यसमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल बिक्री प्रबन्धक रहेको छ । लगानीकर्ताले सि–आस्वा प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा मेरो सेयरमार्फत सेयर भर्न सक्नेछन् ।
रेटिङ एजेन्सी केयर रेटिङले मध्य भोटेकोशीलाई ‘केयरएनपी डबल बी’ रेटिङ दिएको छ । जसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमता औषत जोखिम रहेको जनाउछ ।
केयरले २०७७ मंसिर १८ गते उक्त रेटिङ दिएको थियो । यो रेटिङको म्याद आगामी मंसिर १७ गते सकिनेछ ।
२२ असोज २०७८, शुक्रवार १६:०९ बजे प्रकाशित
आज कात्तिक १ गते रिडी हाइड्रोपावरको लाभांश सुरक्षित गर्ने अन्तिम दिन
सानिमा माई हाइड्रोपावरको कात्तिक ११ गते साधारण सभा
मध्य भोटेकोशीको आइपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
मध्य भोटेकोशीको आइपीओमा आवेदकको ओइरो, कति पर्यो आवेदन ?
आइपीओ निष्कासन गर्ने प्रस्ताव, आज अप्पर स्यांगे हाइड्रोपावर कम्पनीको वार्षिक साधारण सभा